Empira Môgôly - Wikipedia
Ny Empira Môgôly dia empira niorin' i Babur, taranak' i Tamerlan, tao India, tamin' ny taona 1526 raha resiny i Ibrahim Lodi izay soltàna farany tao Delhi tamin' ny ady natao tao Pânipat. Atao hoe شاهان مغول / Šâhân-e Moġul izy amin' ny teny persàna fa مغلیہ سلطنت / Muġliyah Salṭanat kosa amin' ny teny ordo.
Ny mety ho endriky ny sainan' ny fanjakana môgôly
Ny Empira Môgôly tamin' ny andron' i Aurangzeb.
Ny anarana hoe Moghol (izay nadika eto hoe Môgôly) dia nisampana avy amin' ny anaran' ny faritra niavian' ny Timorida, dia ao amin' ny faritra misy zavamaniry iva ao Azia Afovoany izay lasan' i Genghis Khan tany aloha sady fantatra taorian' izany amin' ny anarana hoe Môgolistàna: "tanin' ny Môngoly". Na dia niteny amin' ny fiteny tsagatay aza ny Môgoly tany aloha dia nitahiry fomba amam-panao torko-môngôly, nandray ny kolontsaina persana izy ireo. Izy ireo no nampiditra ny kolontsaina sy ny literatiora persana tao India, nanorina ny fototry ny kolontsaina indô-persana.
Ny Empira Môgôly dia fisehoan' ny tampon' ny herin' ny fielezan' ny finoana silamo tao India. Azo babon' i Sher Shâh Sûrî indray ny ankabeazan' ny tanin' io empira io ary avy eo votsotra nandritra ny fanapahan' i Humâyûn. Nandroso fatratra izy tamin' ny andron' i Akbar, ary ny fandrosoany dia nitohy hatramin' ny fiafaran' ny fanapahan' i Aurangzeb. Rehefa maty ity farany, tamin' ny taona 1707, dia nanomboka ny fihen-danjan' io empira io nefa nanana fahefana ihany nandritra ny 150 taona. Tamin' ny taona 1739 dia resin' ny tafika avy any Persia (na Persa) notarihin' i Nâdir Shâh izy. Tamin' ny taona 1756 dia nisy tafika notarihin' i Nâdir Shâh nandroba an' i Delhi indray raha nanjary toerana ifanandrinan' ny Eorôpeana ilay empira: Nanitatra ny tany fananany ny Britanika sady nanani-bohitra tao Bengaly taorian' ny Ady Fito Taona (anglisy: Seven Years' War). Taorian' ny fikomiana indiana tamin' ny taona 1857 dia namabo an' i Raj ny Britanika, nanao sesitany ny emperora môgôly farany izay andriamanjakan' i India hatramin' io daty io.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Empira_Môgôly&oldid=1000633"
Dernière modification le 24 Janoary 2021, à 10:23
Voaova farany tamin'ny 24 Janoary 2021 amin'ny 10:23 ity pejy ity.